इटहरीमा कोरोना रोकथाम : सुरक्षा निकाय र जनप्रतिनिधीको उदाहरणीय ‘टीमवर्क’
६ जेठमा इटहरी उपमहानगरपालिका– २ का १८ बर्षीय युवकमा कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि उपमहानगरले तत्कालै २ र ३ वडालाई पाँच दिनका लागि सिल गर्यो ।
इटहरीमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको यो पहिलो केश थियो । पहिलो संक्रमण देखिएपछि कोरोना रोकथामको लागि उपमहानगरले बनाएको ‘-यापिड रेस्पोन्स टिम’ युवकको कन्ट्रयाक ट्रेसिङमा जुट्यो ।
इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीका प्रहरी निरीक्षक रमेश बस्नेत नेतृत्वको टोलीले दुई दिनभित्रै संक्रमित युवकको सम्पर्कमा आएका ४६ जनाको सूची तयार ग¥यो । सम्पर्कमा आएका सबैको इटहरीस्थित क्वारेनटाइनबाटै पीसीआर परिक्षण गर्दा सबैको रिर्पाेट नेगेटिभ आयो।
सीमीत स्रोत साधनको भरमा प्रहरी र स्वास्थ्यकर्मीको टोली ‘कन्ट्रयाक ट्रेसिङ’मा जुट्दा जोखिम उतिकै थियो । त्यो भन्दा ठुलो जोखिम प्रहरीलाई पाँच दिनसम्म दुई वडामा गरिएको सिललाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्नु थियो ।
कोरोना संक्रमण देखिएपछि सिल गरिएका वडामा भयका कारण सर्वसाधरण घरमै बसेर स्थानीय प्रशासनलाई सहयोग गरे ।
‘कोरोना रेस्पोन्स टिम’, जोखिम र चुनौतिपूर्ण कार्य
इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीले लकडाउन सुरु भएको हप्ता दिनमै प्रहरी निरीक्षक बस्नेतको कमाण्डमा ‘कोरोना रेस्पोन्स टिम’ बनाएको थियो । जसको जिम्मेवारी संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिहरुको कन्ट्रयाक ट्रेसिङ, उद्धार र क्वारेन्टाइनमा राखिएका नागरिकको विवरण राख्नु थियो ।
नेपाल प्रहरीको ‘कोरोना डेक्स’ बाट प्राप्त भएको कोरोना सुरक्षा र साबधानी सम्बन्धि निर्देशिकाको भरमा प्रहरीको कोरोना रेस्पोन्स टिमले इटहरीको पहिलो केशलाई जोखिम रहित रुपमा कार्य सम्पन्न गरेको थियो ।
कोरोनाको जोखिम नियन्त्रणका लागि सरकारले ११ चैत्रदेखि लकडाउन आवहान गर्यो । लकडाउन नेपालको लागि नौलो अभ्यास थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु प्रहरीको लागि चुनौति र अवसर पनि थियो । शुरु शुरुमा त सर्वसाधरणहरु लकडाउन के हो ? भन्ने जिज्ञासाले सडकमै रमिते बन्न आइपुग्थे । सामान्य बन्द जस्तै पाँच बजेपछि बजारमा भिड्भाड हुन्थ्यो ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न गरिएको लकडाउनमा नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना ‘फ्रन्टलाईन’मा खटिए ।
इटहरी उपमहानगर भित्र यसलाई व्यवस्थीत बनाउन स्थानिय सरकार र सुरक्षा निकाय एकबद्ध भएर लागे । जसमा लकडाउन घोषणा भएको हप्ता दिनभित्रै पहिलो चरणमा भारतबाट आएका व्यक्तिहरुको खोजीमा प्रहरीको टोली जुट्यो । केही व्यक्तिहरु आफै प्रहरीको सम्पर्कमा आए भने धेरैलाई खोजी खोजी निकाल्नु परेको थियो ।
२३ चैत्रमा साउदीबाट फर्किएका एक पुरुषलाई खोजी गर्न प्रहरी दिनभर लागेको थियो । ९ चैत्रमा इटहरी २ आपगाछी घर फर्किएका उनको विवरण गृह मन्त्रालयले इटहरी प्रहरीलाई दिएको थियो । सोही आधारमा उनलाई खोजी गर्न इटहरी प्रहरीको टोली उनको ठेगाना भएको घर पुगेको थियो । तर उनि घरमा थिएनन् । उनि आफन्तकहाँ गएपछि उनलाई खोजी गर्न प्रहरी अलमलियो ।
इटहरी २ नं. वडा भएपनि भौगोलिक रुपमा उनको घर पुग्न मुस्किल थियो । बिहान ९ बजे उनको घर पुगेको प्रहरीले अन्ततः ती पुरुषलाई साँझ ७ बजे भेटाइ क्वारेनटाइनमा ल्याइयो । क्वारेनटाइनमा नबस्ने अडान लिएपछि जवरजस्र्ती उनलाई एम्बुलेन्समा हालेर ल्याइएको थियो ।
‘त्यो बेला विदेशबाट फर्किएकाहरुबाट संक्रमणको ठुलो जोखिम थियो’, इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीका प्रहरी निरीक्षक मानबहादुर श्रेष्ठ भन्छन् ‘बिदेशबाट फर्किएकालाई स्पष्ट रुपमा क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्ने निर्देशन थियो’ । ‘कतिपय प्रहरी लिन आयो भनेर लुक्ने, भाग्न र आफन्तकहाँ गएर बस्ने गरेको अबस्था थियो’ ।
उपमहानरले समयमै स्थापना गरेको इटहरी ५ स्थित जनता बहुमुखी क्याम्पसको क्वारेनटाइनमा भारतबाट आएका १०७ जनालाई राखियो । दोस्रो चरणमा तेस्रो मुलक अर्थात साउदी, बेलायत, अमेरिका र दुबईबाट फर्किएका ६५ जनालाई पनि क्वारेन्टाइनमा राखियो ।
बिदेशबाट फर्किएका उनीहरुलाई उपमहानगरले तयार गरेको एम्बुलेन्स मार्फत घर घरबाट क्वारेन्टाइनमा लगियो । त्यस समय संक्रमण फैलिन सक्ने डर बिदेशबाट फर्किएकाहरुबाट धेरै थियो ।
लकडाउनको चौथो हप्तादेखि स्थानीय निकायले बिभिन्न जिल्लामा अलपत्र परेका आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता लिन सबारी साधन पठाए । इटहरी प्रदेश १ को ‘ट्रान्जिट रुट’ भएकाले सबै सवारी साधन इटहरी हुँदै आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नु पर्दथ्यो ।
संक्रमणको चुनौतीमा प्रहरी र उपमहानगरको समन्वयमा बाहिरबाट आएकाहरुलाई गन्तब्यसम्म पुग्ने सहज व्यवस्था मिलाइएको थियो । कतिपय जिल्लाका नागरिकलाई इटहरीमा ल्याएर अलपत्र बनाइयो ।
जसमा उपमहानगर र प्रहरीको टोलीले बस र ट्रकको व्यवस्थापन गरि गन्तब्यसम्म पु¥याउने काम ग¥यो । इटहरी प्रहरीको तथ्याङक अनुसार जेठ २६ गतेसम्म ३४ सयलाई आफ्नो गन्तव्यमा पठाइएको छ । अलपत्र परेका नागरिक मध्ये टाढाँ पुग्नुपर्नेहरुलाई प्रहरीले आश्रय दिएर समेत राखेको थियो ।
लकडाउनमा इटहरी उपमहानगर भित्र रहेका सडक बालबालिकाहरुको व्यवस्थापनको चुनौती अर्काे थियो । उपमहानगरले इटहरी– ९ को जनता माबिको भवनलाई सडक बालबालिकालाई राख्ने क्वारेनटाइन बनायो । सडकमा भोकभोकै अलपत्र परेका सडक बालबालिकाहरुलाई प्रहरीले उठाउँदै क्वारेनटाइनमा राख्न मद्धत ग¥यो ।
तर क्वारेनटाइनमा राखिएका १७ जनालाई खानाको समस्या देखिएपछि इटहरीका डिएसपी धर्मराज भण्डारीले सबैलाई प्रहरीकै मेशमा बनेको खाना १५ दिनसम्म नियमित खुवाए । पछि अन्य संघसंस्थाहरुले प्रहरीले कामलाई सहयोग गदै खाद्यान्न तथा फलफूल सहयोग गर्न थाले ।
यता लकडान कार्यान्वयन गर्न प्रहरीलाई दिनप्रति दिन चुनौती बन्दै गयो । लकडाउन उल्लघन गर्नेहरु थमाथम बढ्न थालेपछि इटहरी उपमहानगरको विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट लकडाउन उल्लघन गर्नेहरु बिरुद्ध कारबाही गर्ने सहमति भएपछि प्रहरीलाई बाटो खुल्यो । त्यससगै गृह मन्त्रालयले पनि लकडाउन कडा बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रहरीलाई परिपत्र ग¥यो ।
पहिलो चरणमा प्रहरी र उपमहानगरले सबै वडामा माइकिङ गरी सचेत गरायो । तर उल्लङघन बढ्न थालेपछि प्रहरीले सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिन थाल्यो । साथै लकडाउनमा अत्याबश्यक काम बाहेक बाहिर हिड्नेहरुलाई धमाधम पक्राउ ग¥यो । लकडाउन उल्लघन गर्नेको सवारीसाधन १५ दिन प्रहरी कार्यालयमा राख्यो भने सडकमा हिडडुल गर्ने सर्वसाधरणलाई सडकमै तीन घण्टा उभ्याएर कारवाही ग¥यो ।
प्रहरीको कारबाहीले सडकमा लकडाउन उल्लघन गर्नेहरुको संख्या क्रमश घट्दै गयो । प्रहरीले २६ जेठसम्म १ हजार ७८ वटा सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएको थियो भने २ हजार ३०९ जना सर्वसाधरण कारबाहीमा परे ।
सरकारले लकडाउनको अबधि बढाउँदै गर्दा इटहरी उपमहानगरले स्थापना गरेको क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरुको संख्या पनि बढ्दै गयो । क्वारेनटाइन नभएका स्थानिय निकायबाट पनि मान्छेहरु पठाउन थालिएपछि त्यसको व्यवस्थापन गर्न उपमहानगर र प्रहरीलाई थप चुनौति थपियो ।
प्रहरीले क्वारेनटाइनमा बस्नेहरुको विवरण राख्नुको साथै क्वारेनटाइन स्थलको सुरक्षा दिने गर्दथ्यो । नेपाली सेनाको एक टोली क्वारेनटाइन स्थलमै बस्न थालेपछि प्रहरीलाइ सहज भयो ।
उपमहानगर र इटहरी अस्पतालको समन्वयमा क्वारेनटाइन स्थलबाटै पीसीआर र आरडीटी परिक्षण सुुरु गरियो । त्यसको व्यवस्थापनमा पनि प्रहरी खटियो ।
जेठ २६ गतेसम्म इटहरी क्वारेनटाइन मार्फत १६७ पीसीआर र ३४९ जनाको आरडीटी परिक्षण गरिसकेको अवस्था छ ।
लकडाउनको समयमा इटहरी उपमहानगरले निर्धारण गरेको बिहान ७ देखि १० बजेसम्म पसल खोल्ने कार्यलाई व्यवस्थीत गर्ने जिम्मा प्रहरीकै थियो । यही समयमा बजारमा कालोबजारी गर्ने महंगोमा सामान बेच्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न उपमहानगरको नेतृत्वमा अनुगमन र छड्के टिम बनाएर प्रहरी खटिएको थियो ।
समय समयमा हुने नगर स्तरिय विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट बदलिदो परिस्थितिलाई सामान गर्ने विषयमा छलफल हुदै आएको छ ।
परिक्षण नहुँदा प्रहरी अन्यौलमा
इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीका कोरोना डेक्सका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक बस्नेत निरन्तर रुपमा कोरोनासँग जोडिएको केशमा खटिए । उनको कोरोना परीक्षण अहिलेसम्म भएको छैन । कोरोना डेक्ससँग जोडिएर खटिएका अन्य प्रहरीको समेत परिक्षण नभएको अवस्था छ ।
परिक्षण नगर्दा घर जान समेत नपाएको उनी बताउँछन । ‘हामीले उपमहानगरलाई प्रहरीको पनि परिक्षण गरिनु पर्छ भन्यौ, तर किन हो अहिलेसम्म हाम्रो परिक्षण हुन सकेन’ बस्नेत भन्छन् ‘डर मानी मानी डिउटीमा खटिनु परेको छ ।’
इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीको मातहतमा १७३ प्रहरी छन् । जसमा १० जना प्रहरी कार्यालय भित्रकै काममा खटिन्छन् । बाँकी प्रहरी निरन्तर फिल्डमा छन् । फिल्डमा खटिने प्रहरी यो समयमा अत्यन्त जोखिममा रहेको बस्नेत बताउँछन् ।
स्थानिय निकायसँग समन्वय गरेर अघि बढ्दा पनि प्रहरी एक्लो हुन्छ । लकडाउनको डिउटी, क्वारेनटाइनको डिउटी, संक्रमण भएका व्यक्तिको उद्धार, सवारीसाधनको चेकजाँच र व्यवस्थापन लगायत सबै काममा प्रहरी खटिनुपर्छ । प्रहरीको अन्य डिउटी त बाँकी छदैछ । यस्तो परिस्थितिमा काम गर्नुपर्दा चुनौती रहेको बस्नेतको दुखेसो छ ।
लकडाउनको पाँचौ हप्ताको बीचमा प्रहरी चौकी तरहराको हिरासतमा रहेका एक युवको आरडीटी परिक्षणमा पोजेटिभ देखियो । त्यसले प्रहरी भित्र डरको माहोल बनायो । पछि पूनं परिक्षण गर्दा नेगेटिभ देखियो ।
‘हामीले यो लकडाउनको समयमा हिरासत खाली राख्ने प्रयास समेत गर्याे । तर लकडाउनको समयमा पनि अपराधिक घटना घट्ने भएकाले त्यो सम्भव भएन ।’
‘अहिले हिरासत कक्षलाई दैनिक ‘स्यानेटाइज’ गछौ, आफन्तहरुले ल्याएको खानामा प्रतिबन्ध गरेका छौ । प्रहरी निरीक्षक बस्नेतले भने ‘शंका लागेका व्यक्तिलाई तत्कालै परिक्षण गरेर मात्र हिरासतमा हाल्ने गरेका छौं ।’
‘माक्स, स्यानेटाइजर र पन्जा मुस्किलले हामी आफैले व्यवस्थापन गरेका छौ’ उनले थपे ‘संक्रमणको दर इटहरीमा बढ्ने अबस्था आयो भने प्रहरी बिना पीपीई उद्धारमा खटिनु पर्छ ।’
लकडाउन घोषणा भएको तीन महिना बित्नै लागेको अबस्था छ । यो बीचमा सर्बसधारणबाट लकडाउन कार्यान्वयनमा सहयोग नपाएको इटहरीका डिएसपी धर्मराज भण्डारी बताउँछन ।
उनले आफ्नो अनुभव यसरी सुनाए :
लकडाउन आजभोली सर्वसाधारणका लागि आम विषय भइसकेको छ । नेपालमा यसको सक्रमण बढ्ने अवस्थामा छ । त्यसमा पनि सरकारले लकडाउनलाई खुकुलो बनाउँदै गएको छ । तर सर्वसाधरणले अझै पनि सवधानी नअपनाए भोली दिन भगवान भरोसा हुन्छ ।
लकडाउनको शुरुवती दिनमा सर्वसाधरण लकडाउन प्रहरीको लागि लाइदिएको झैँ गर्दथे । नियन्त्रणमा लिने क्रममा उनीहरू यति बाहाना बाजी गर्थै कि हामी आफै छक्क पछौं । सुरुवाती अवस्थामा सर्वसाधारण सडकमा रमिता हेर्नकै लागि भनेर लकडाउन उल्लघंन गरे ।
लकडाउन कार्यान्वयन र कोरोना रोकथामका निम्ती सिमित साधन स्रोत र जनशक्ती अभावका बिच काम गर्दा चुनौती भने इटहरी प्रहरीले अझै बोगिरहेको छ ।
लकडाउन पूर्णरुपमा खोलेको अबस्था छैन । सरकारले निर्धारणको समय र मोडालिटि अनुसार डिउटी खटाउनु पर्छ । पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा सबै ठाँउमा प्रहरी खटाउन पनि मुस्किल अबस्था छ ।
यो समयमा प्रहरी सिधै समुदाय स्तरमा केन्द्रित हुन्छ । जसले गर्दा प्रहरी आफै संक्रमित हुने त हैन भन्ने डर पनि छ । साबधानी अपनाउन स्थानिय सरकार, बिभिन्न संघसंस्थाले उपलब्ध गराएका सिमित स्यानिटाइजर, माक्स र पन्जाहरुको भरमा प्रहरीले काम गरिरहेको छ ।
‘यो समयमा सुरक्षा निकायको पनि कोरोना परिक्षण हुनुपर्ने हो । तर स्थानिय सरकारले चासो दिएको छैन । हामीले धेरै पटक बैठकमा पनि कुरा उठायौ, सबैको नभए प्रत्येक युनिटबाट ५ जनाको दरले पिसिआर परिक्षण गरिदिए हामी ठुक्क हुनेथियौ ।’
सुरक्षा निकायको योगदान : प्रशंसनीय
कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि उपमहानगरको पहिलो प्राथमिकता सुबिधा सम्पन्न क्वारेनटाइन बनाउनु थियो । लकडाउन भएको पहिलो हप्ता भित्रै जनता कलेजलाई क्वारेनटाइन बनाउने निर्णय भयो । बिश्व स्वास्थ्य संगठनको मापडण्ढ अनुसार क्वारेनटाइन बनाउनु पर्ने भएकाले पहिलो चरणमा यसको योजना निर्माणमा नेपाली सेनाले मद्धत ग¥र्याे ।
नेपाली सेनाको पूर्वी पृतना हेडक्वाटर इटहरीको एउटा टिम र उपमहानगरको समन्वयमा शुरुमा ६० बेडको क्वारेनटाइन निर्माण भयो । पछि क्वारेनटाइनको क्षमता बढाउनु पर्ने देखिएपछि इटहरीका केही संघसंस्थाको सहयोगमा सामाग्री जुटाएर हाल सय बेडेको क्यावरेन्टाइन बनाइएको छ ।
अहिले भने क्वारेनटाइन स्थलको सुरक्षाको जिम्मेवारी नेपाली सेनाको छ भने क्वारेनटाइनमा बस्नेहरुको सम्पूर्ण विवरण नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले राख्दै आएको छ ।
क्वारेनटाइन भित्र इटहरी अस्पताल र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सुनसरीको चिकित्सक टोली २४ घण्टा तैनाथ छ ।
समग्रमा तीन महिनाको लकडाउनको अवस्थामा सुरक्षा निकायबाट उपमहानगरले सञ्चालनमा ल्याएको क्वारेनटाइनको व्यवस्थापन र लकडाउन कार्यान्वयनमा देखाएको भुमिका प्रसंशनीय रहेको इटहरी उपमहानगरको उपमेयर लक्ष्मी गौतम बताउँछिन् ।
सुरक्षा निकाय सँगसँगै नगर र वडास्तरका जनप्रतिनिधिहरु पनि खटिएको बताउँदै उनले दुवै निकायको समन्वयले इटहरी कोरोनाको ‘हटस्पोट’ हुन नसकेको उनको भनाई छ ।
‘हामीले इटहरी भित्र कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन बिभिन्न योजना बनायौं, त्यसको कार्यान्वयन प्रहरीले गर्यो’ उनले भनिन् ‘केही चुनौतीबीच आजको दिनसम्म इटहरी कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित छ’ ।
यता किट अभावले गर्दा सुरक्षाकर्मीको परीक्षण गर्न नसकिएको उपमेयर गौतमले जानकारी दिईन् । ‘हामी आफैले किटजन्य सामाग्री खरिद गर्ने पनि तयारी गरेका छौ । तर पर्याप्त किट खरिद गर्न बजेट अभावदेखि स्थानिय, प्रदेश र संघिय सरकारको समन्वय नमिल्दा ढिला भइरहेको छ’ ।
किट व्यवस्थापन भएपछि फ्रन्टलाईनमा खटिएका सुरक्षा निकाय, जनप्रतिनिधि तथा चिकित्सकहरुको पहिलो प्राथमिकतामा परिक्षण गर्ने उपमहानगरको योजना रहेको गौतमले जानकारी दिईन् ।
अहिले सरकारले नागरिकको समस्यालाई मध्यनजर गरेर लकडाउन खुकुलो बनाउने मोडालिटि बनाएको छ । सडकमा निजि सवारी साधन चलाउनदेखि पसल तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न भनेको छ । तर नेपालमा संक्रमणको दर भने बढ्दो अबस्थामा छ ।
यो अबस्थामा सुरक्षा निकायका अंग तथा स्थानिय सरकारले बजार तथा सडकमा सावधानीका उपाय, सामाजिक दुरी कायम भए नभएको तथा भिडभाड हुन नदिन अनुगमन गर्न अति आबश्यक छ ।
यो आलेख इटहरी उपमहानगरपालिका र नेपाल पत्रकार महासंघ सुनसरीको फेलोसिप कार्यक्रम अन्तरगत तयार पारिएको हो ।